कसरी इन्स्टाग्रामको लागि फोटोहरू सम्पादन गर्ने: प्रोग्रामहरू र अनुप्रयोगहरू क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | 07/06/2021 16:12 | अद्यावधिक गरियो 07/06/2021 16:14 | फोटोग्राफी
अहिले, एक सामाजिक नेटवर्क जुन फेसनमा छ र त्यो चित्रमा प्राथमिकता प्राथमिकताद्वारा चित्रण गरिएको छ इन्स्टाग्राम हो। सबैजनासँग एक खाता छ र फोटोहरू अपलोड गर्दछ, यद्यपि केवल गुणस्तरको मात्र विजय हुन्छ। त्यसकारण धेरैले इन्स्टाग्रामको लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने भनेर जान्न युक्तिहरू खोज्छन्।
यदि तपाईं पनि त्यो खोजीमा हुनुहुन्छ र जान्न चाहनुहुन्छ भने कसरी इंस्टाग्राममा तपाईंको फोटो को अधिकतम प्राप्त गर्ने (कि तपाइँ अधिक अनुयायीहरू पाउनुहुन्छ, कि ब्रान्डले तपाइँलाई सूचना दिन्छ, आदि।) त्यसोभए हामीले के तयारी गर्यौं त्यसमा एक नजर राख्नुहोस्।
1 पहिलो चरण आफैलाई इंस्टाग्राममा तपाईंको फोटो संग अलग गर्न को लागी
1.1 इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू जुन तपाईंको फोटोहरू बढाउँछन्
1.2 इन्स्टाग्राम विकल्पहरू
2 ईन्स्टाग्रामको लागि फोटो सम्पादन गर्न अनुप्रयोगहरू
2.1 इंस्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: स्थापना गर्नुहोस्
2.3 स्नप भयो
2.4 इंस्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: लाइटरूम
2.5 एडोब फोटोशप टच
पहिलो चरण आफैलाई इंस्टाग्राममा तपाईंको फोटो संग अलग गर्न को लागी
इन्स्टाग्राम "सानो सामाजिक नेटवर्क" होईन। आज दैनिक 60 करोड भन्दा बढी फोटोहरू छन्, जसले तपाईंको पोष्टहरूलाई लगभग अदृश्य बनाउँदछ यदि तपाईंले यो सही गर्नुभएन भने। बदलामा, तपाईं million०० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ जो यसमा छन्।
र यो कसरी पाउने? ठीक छ, यद्यपि यो गाह्रो देखिन्छ, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन गर्न सकिन्छ, केवल इन्स्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने, तर अन्य पक्षहरू जुन कहिलेकाँही, हामी बेवास्ता गर्दछौंजस्तै फोटो, वा भिडियोहरूको लागि सहि साइज प्रयोग गरेर। वा गुणवत्ता फोटोहरू लिनुहोस् र हामीसँग भएको खातासँग सम्बन्धित।
तपाईंको लक्ष्य फोटोहरू स्नेप गर्न र तिनीहरूलाई छिटो ह्यान्ग गर्नुपर्दैन। तर तिनीहरूलाई एक पेशेवर फिनिश दिनुहोस्। र यसको मतलब तपाईको पछाडि सबै कुरा पुन: निर्माण गर्न डिजाइनर भएको होइन, वा एक पेशेवर फोटोग्राफर; तर केहि विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोस् जस्तै चमक, कन्ट्रास्ट, फिल्टरहरू, इत्यादि।
इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू जुन तपाईंको फोटोहरू बढाउँछन्
अनुप्रयोगहरूको बारेमा कुरा गर्नु अघि जसले तपाईंलाई आफ्नो फोटोहरू इन्स्टाग्रामको लागि पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कले नै तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने उपकरणहरू थाहा पाउनुपर्दछ, के तपाई सोच्नुहुन्न? यस अवस्थामा, हामी फिल्टरहरू केमा केन्द्रित हुन्छौं।
इन्स्टाग्राममा तपाईंसँग फिल्टरहरूको सीमित मात्रा छ जुन तपाईंको फोटोको गुणस्तर सुधार गर्दछ। तपाईंको स्वादमा निर्भर रहन्छ, त्यहाँ केहि हुनेछ जुन तपाईंलाई कम वा कम मनपर्दछ। उदाहरण को लागी, क्लेरन्डन संग तपाईको छायाँमा अधिक गहन टोन हुन्छ, जसले फोटोहरु लाईटि improvesमा सुधार गर्दछ। वा LARK को साथ, जसले तपाईंलाई अधिक संतृप्ति हटाएर फोटो प्रदान गर्दछ।
सबै इन्स्टाग्राम फिल्टरहरू परिवर्तन गर्दछ र तपाईंको छविको उपस्थिति सुधार गर्दछ, तर त्यहाँ अन्य प्यारामिटरहरू छन् जुन यसलाई सुधार गर्न सक्दछ।
जब तपाईं इन्स्टाग्राममा फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई फोटोमा फिल्टर राख्न मात्र अनुमति दिदैन; तपाईंसँग फोटो पनि रहेको प्यारामिटरहरू देख्ने प wheel्क्ति पनि छ, र तिनीहरूको गुणस्तर सुधार गर्न तपाईं तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। के मापदण्डहरु? हामी चमक, संतृप्ति, न्यानोपन, कन्ट्रास्ट, छायाको बारेमा कुरा गर्छौं ...
यदि तपाईं त्यो डाटा फरक गर्न केहि समय खर्च गर्नुभयो भने, तपाईं कुनै अन्य अनुप्रयोग स्थापना गर्न आवश्यक बिना इन्स्टाग्रामको लागि फोटोहरू सम्पादन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। उदाहरण को लागी, धेरै जसो ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट र lights० लाईट कम गरी छविको भिजुअल सुधार गर्दछ। सबै चीजहरू जाँच गर्दैछ जुन तपाईले अपलोड गर्ने प्रत्येक फोटोको लागि उत्तम विकल्प हो।
ईन्स्टाग्रामको लागि फोटो सम्पादन गर्न अनुप्रयोगहरू
यदि तपाइँ अनुप्रयोगहरूले नेटवर्कले प्रदान गर्ने विकल्पहरूको सट्टा इन्स्टाग्रामको लागि फोटो पुनःचुनाव गर्न अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, हामीले केही उत्तमहरूको संकलन गरेका छौं। तिनीहरूसँग तपाईंसँग अनौंठो फोटोहरू सिर्जना गर्ने बढी सम्भावनाहरू हुनेछन्, त्यसैले तपाईंलाई परीक्षाको लागि र परिणामहरू हेर्नको लागि मात्र समय चाहिन्छ।
यसले तपाईंको खातालाई अलग बनाउन सक्दछ, त्यसैले गुणस्तरीय फोटोहरू लिन पर्याप्त समय खर्च गर्नुले प्रभाव पार्छ भविष्यमा लगानी हो, विशेष गरी यदि तपाईंले आफ्ना अनुयायीहरू माथि गएमा देख्न थाल्नुभयो भने।
इंस्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: स्थापना गर्नुहोस्
हामी एउटा अनुप्रयोगको साथ शुरू गर्छौं जुन यो ईन्स्टाग्राममा अपलोड गर्ने फोटोहरूमा ठीक केन्द्रित छ। यस अवस्थामा तपाईले कोलाज सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ वा फिल्टरहरू, बोर्डरहरू, फोटोहरूको आकार परिवर्तन गर्न, पाठ थप्न सक्नुहुनेछ।
योसँग धेरै रहस्य छैन र योसँग काम गर्न सजिलो छ, यद्यपि यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा अझ विस्तृत रचना हो भने, यो तपाईका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।
यो अनुप्रयोग एक उत्तम इन्स्टाग्राम, वा सामान्यतया कुनै अन्य प्रयोगको लागि फोटो सम्पादन गर्न को लागी हो। तपाईंसँग धेरै मानक फिल्टरहरू र उपकरणहरू छन्, तर अरूहरू जुन पूर्ण रूपमा तपाईंको फोटोहरू परिवर्तन गर्दछ।
यद्यपि यो अनुप्रयोग नि: शुल्क छ, त्यहाँ अधिक उन्नत उपकरणहरूसँग सशुल्क संस्करण छ, प्रिसेटहरू र अन्य विवरणहरू जुन तपाईं सफल हुनुहुन्छ भने साइन इन गर्न लायक हुनेछ।
यो VSCO समान छ, तर टोनहरू समायोजित गर्न सक्षम हुनुको फाइदा छ, थप फिल्टरहरू छ र तिनीहरूको सानो विवरणमा फोटोहरू सुधार गर्न। तपाईंसँग नि: शुल्क संस्करण छ, तर त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष पनि छ जुन स्पष्टतया अघिल्लोमा सुधार हुन्छ।
स्न्यापसीमा के राम्रो छ? राम्रो मा तपाईंलाई HDR समायोजन प्रस्ताव गर्नुहोस्, क्याप्शन सम्मिलित गर्न सक्षम हुँदैमा, यससँग अधिक फ्रेमहरू छन् ...
इंस्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: लाइटरूम
यस अनुप्रयोगले तपाईलाई पेशेवर स्तरमा फोटो पुनःचुनाव गर्न अनुमति दिन्छ। वास्तवमा, यो यति पूर्ण छ कि तपाइँ ती समायोजनहरू एक कम्प्युटर प्रोग्रामको पारित गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा धेरैले आवेदनलाई मौका दिइरहेका छन्।
र तपाईं इन्स्टाग्रामको लागि फोटो सम्पादन गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, सुरु गर्न, तपाईं प्रकाश र रंग, साथ साथै फोटो को अन्य प्यारामिटर लाई प्रकाश, तेज, आदि सुधार गर्न पुनःचरण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंसँग प्रिसेटहरू छन् र तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
एडोब फोटोशप टच
फोटोशप छवि सम्पादनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो र हो, यसको मोबाइल संस्करण हुनुपर्दछ। यस अवस्थामा, उपकरण धेरै राम्रो छ किनकि यसले तपाईलाई व्यावहारिक रूपमा समान कार्य गर्न अनुमति दिन्छ कम्प्युटरको साथ।
हो, यो जोसँग पहिले नै अनुभव छ, किनकि शुरुवातकर्ताहरूका लागि उपकरण प्रयोग गर्न धेरै जटिल छ, कम्तिमा तपाईका फोटाहरूबाट राम्रो प्राप्त गर्न।
र तपाईंले सोच्नु भन्दा पहिले योसँग दुई संस्करणहरू छन्, नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको। थप रूपमा, यससँग स्मार्टफोनका लागि अनुप्रयोग र ट्याब्लेटहरूको लागि अर्को अनुप्रयोग छ। तिनीहरू एक अर्कासँग धेरै समान छन्, तर तिनीहरू दुबै उपकरणहरूमा प्रयोगयोग्यता सुधार गर्नमा केन्द्रित छन्।
यदि तपाईंसँग एक इन्स्टाग्राम खाता छ जुन खाद्यान्नमा केन्द्रित छ, भने यो अनुप्रयोग तपाईंको लागि उत्तम हुन सक्छ। र यो व्यंजन र खाना को फोटो सुधार गर्न मा केन्द्रित छ।
तपाईं यसलाई दुबै एन्ड्रोइड र आईओएसमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यो नि: शुल्क छ। तपाईं यसको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ? राम्रो तपाईंले खाना फोटोहरूका लागि फिल्टरहरू भेट्टाउनुहुनेछ (यसमा २० भन्दा बढि बिभिन्नहरू छन्) र साथै अन्य उपकरणहरू जस्तै ब्लरि,, फोटो रिसाइज गर्ने, फ्ल्यासलाई प्रकाश दिनको लागि फ्ल्यास फोटो लिँदा ...
Google Play र App Store मा त्यहाँ धेरै अधिक अनुप्रयोगहरू छन्। हाम्रो सल्लाह को लागी धेरै को लागी एक खोज्न को लागी तपाइँ को लागी शैली को लागी उत्तम सूट गर्दछ। के तपाइँ कुनै थप सिफारिश गर्नुहुन्छ इंस्टाग्रामको लागि फोटो सम्पादन गर्नका लागि?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » फोटोग्राफी » इंस्टाग्रामका लागि फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने